Iinqwelo-moya zaseNordwind ziQalela kwakhona ukuHamba ngokuthe ngqo eSt.Petersburg ukuya eStuttgart
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelo-moya zaseNordwind ziQalela kwakhona ukuHamba ngokuthe ngqo eSt.Petersburg ukuya eStuttgart
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Inkonzo yomoya phakathi kweSt. Petersburg kunye neStuttgart izakuvulwa ukusukela nge-22 ka-Agasti ngeCawe.
Iinqwelomoya zaseNordwind ziya kuphehlelela inqwelomoya eya eHannover ukusuka nge-18 ka-Agasti.
I-Nordwind Airlines izakusungula inqwelomoya eya eFrankfurt am Main ukusukela nge-19 ka-Agasti.
Iindiza eziya eHannover ziya kwenziwa ngeveki ngolwesiThathu naseFrankfurt am Main ngoLwesine.
I-Northern Capital Gateway, inkampani yolawulo ye Isikhululo senqwelomoya iPulkovo eSt. Petersburg, iRussia yabhengeza ukuba umntu ophethe iholide waseRussia Iinqwelo-moya zaseNordwind Izakusungula inqwelomoya ethe ngqo ukusuka ePulkovo Airport ukuya eStuttgart yaseJamani ukuqala nge-22 ka-Agasti 2021.
“Inkonzo yomoya phakathi kweSt. Ixesha lendiza liza kuba malunga neeyure ezintathu, ”utshilo inkampani.
Le yindawo entsha kwisikhululo seenqwelomoya ukusukela ngexesha lokwaziswa kwezithintelo ezinxulumene ne-coronavirus, inkonzo yeendaba ye-Northern Capital Gateway yatsho.
I-Nordwind Airlines izakuphinda isungule iindiza ezimbini ezicwangcisiweyo ukuya eJamani, eHannover ukusuka nge-18 Agasti ukuya eFrankfurt am Main ukusukela nge-19 ka-Agasti.
Iindiza eziya eHannover ziya kusebenza ngeveki ngolwesiThathu naseFrankfurt am Main ngoLwesine.